Arooska Qarniga Qaybtiisa 1, aad Oo Lagu soo Bandhigi doono Arooskii Qarniga Qaybtiisa 2, aad - Cakaara News
Arooska Qarniga Qaybtiisa 1, aad Oo Lagu soo Bandhigi doono Arooskii Qarniga Qaybtiisa 2, aad
Jigjiga(Cakaaranews) Isniin, 12ka September 2016. Waxaa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga gaar ahaan hoolka sayidka kadhici doona maqribnimada maalinta Talaadada ah ee inagu soo aadan aroos lamagac-baxay arooska qarniga qaybtiisa 1,aad oo ay kulamaanoobeen lamaanaha is-doortay ee sharafta leh oo kala ah: mudane Fatxi Cali Shariif(shariifka)iyo marwo Istaahil Maxamed Khaliif(prince istaahil), kaas oo ay kasoo qaybgali doonaan ugu yaraan 2kun oo shaqsi oo isugu jira mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu horkacayo madaxwayne CMC, agaasino, shaqaalaha xafiisyada kaladuwan ee heer deegaan iyo shacab intaba.
Arooskan oo noqonaya mid mataaneeya hab-dhaqankii hore ee aroosyada iyo nidaamka danbe ee casriga ah oo yeelan doona booliskii iyo maxkamadii qaabilsanaa soo kicinta dadka iyo kuxukunka-qaadida heesaha, geeraarada, gabayada, dhaantooyinka, waydiinta hal-xidhaalaha oo ay weheliso cayaaraha qoob-kacayaarka ah ayaa waxaa kharashkiisa damaanad-qaaday Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya.
Kadibna, waxay lamaanahan arooskoodu lamagac-baxay arooska qarniga qaybtiisa 1, aad uhoyan doonaan dhul ay xukuumadu siisay islamarkaana uu XDSHSI uga dhisay guri villa ah oo si casri ah loo qalabeeyay.
Hadaba, waxaa iswaydiin leh arooska qarniga qaybtiisa 1, aad garanay oo waa mudane fatxi iyo marwo istaahil, ee muxuu yahay arooska qarniga qaybtiisa 2, aad??
Waa arin farxad ah oo aan horay loo arag loona maqal islamarkaana layaab leh oo iskadaa gayiga ay soomaalidu dagtee aan geeska Africa horay uga dhicin. Taas oo farxad galin doonta khaasatan dhalinyaro badan oo deegaanka ah. Arintan ugubka ah oo dhakafaarin doonta dad badan islamarkaana loogu talagalay farxadaha isgalay ee ciida iyo sanadka cusub ee 2009TI ayaa waxaa halkaa inoogu soo bandhigi doona caruuska iyo caruusada waa mudane fatxi iyo marwo istaahile.